Tae-kwon-do WTF – “Open de Madagascar” : voahosotra ho mpikatroka mendrika i Aina | NewsMada
Tae-kwon-do WTF – “Open de Madagascar” : voahosotra ho mpikatroka mendrika i Aina
Anisan’ny nisongadina, tamin’ny «Open de Madagascar », taranja tae-kwon-do, natao ny faran’ny herinandro lasa teo, ny zava-bitan-dRazanatahiana Aina, mpikatroka avy any Vatovavy Fitovinany.
Tanteraka soa aman-tsara ihany ny «Open de Madagascar», taranja tae-kwon-do WTF, notarihin’ny filohan’ny federasiona vaovao, Boto Lamina Tsaradia, na nisy aza ny sakana tamin’ny alalan’ny taratasy, nalefan’ny minisiteran’ny fanatanjahantena, ho an’ny kaominina Antananarivo, tsy hahafahana manokatra ny kianja mitafo ka voatery namindrana ny fifaninanaNA, tao ambanin’ny «gradin» Mahamasina. Fihaonana, notanterahina ny asabotsy lasa teo.
Na teo aza izany, afa-po ireo mpijery tonga nanatrika ny fihaonana. Anisan’ny nisongadina indrindra tamin’izany ny zava-bitan-dRazanatahiana Aina, avy any amin’ny ligin’i Vatovavy Fitovinany, izay voahosotra ho mpikatroka mendrika indrindra, teo amin’ny sokajy -45 kg “cadette”. Nahatalanjona ireo teknisianina sy izay rehetra nanatrika ny ady nataony ny teknika nasehony, toy ny daka tsara fiantefa eny amin’ny lohan’ny mpifanandrina, izay nampihoraka ny mpijery.
Resiny, teo amin’ny famaranana, i Antsaly, avy amin’ny Gym Center Analamanga. Marihina fa nitana ny laharana voalohany, tamin’ity, ny klioba Sonrang Analamanga, nandrombaka medaly volamena 10. Faharoa ny Lion Club, nahazo volamena efatra ary fahatelo ny Gym Center, niambozona volamena roa.
Raha ity vokatra ity, nilaza ny federasiona fa azo antoka ireo mpandimby, amin’ity haiady tae-kwon-do Wtf, ity.